डेढ दर्जन भन्दा बढी गीत गाइसकेका तथा संगीत भरेका गायक एवम् संगीतकार राइमन राईले आत्महत्या गरेका छन् । - Glamorous Icon
कान्समा मीन भामको ‘चिसो वर्ष’ले जित्यो नर्वेजियन पुरस्कार
१९ श्रावण २०७४, बिहीबार ०५:४४
‘कान्स फिल्म फेस्टिभल’मा प्रियंकाको उपस्थिति
PRIYANKA KARKI - RUSLAN FASHION SWIMWEAR CALENDAR PICTURES
लिटिल प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेज नेपाल सम्पन्न
CHOREOGRAPHER ROJIN SHAKYA AWARDED AS MR. VERSATILE OF THE YEAR
ANUSHKA SHRESTHA WINS SILVER JUBILEE EDITION OF MISS NEPAL PAGEANT
‘रणवीर’को ‘तिरिमिरी तिनतारा’मा सुशिल र शुभेच्छाको छमछमी
प्रोस्टाइल म्यानहन्ट इन्टरनेसनलका बिजय विवेश श्रेष्ठ
‘समर लभ’को ‘साया’ गीत रिलिज !!!!!
‘चङ्गा चेट’ शिर्ष गीत रिलिज
Lapcha Theyn Boya - New Nepal Bhasha Song 2018/2075 | Sareeta Prajapati ...
‘हरे राम हरे कृष्ण’ सार्बजनिक ( भिडीयो )
कोरियोग्राफर रोजिन र इभेन्ट आयोजक धीरजलाई नेसनल युथ लिड अवार्ड
इन्टरनेशल कोरीयोग्राफर फैजु अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक पनि
के गम्भिर बनेका हुन् आर्यन सिग्देल ?
सम्हालिन्छ कहिले मन’मा सोनम अनुवन्धित
Home›GIcon News›डेढ दर्जन भन्दा बढी गीत गाइसकेका तथा संगीत भरेका गायक एवम् संगीतकार राइमन राईले आत्महत्या गरेका छन् ।
डेढ दर्जन भन्दा बढी गीत गाइसकेका तथा संगीत भरेका गायक एवम् संगीतकार राइमन राईले आत्महत्या गरेका छन् । धरान–११ सिर्जनाचोकस्थित फूपूको घरमा बस्दै आएका राईले बुधबार बिहानको राति १ बजेतिर आत्महत्या गरेको अवस्थामा फेला पारेको प्रहरीले पुष्टी गरेको छ । त्यसो त, उनी झुण्डिएको अवस्थामा देखेपछि परिवारले प्रहरीलाई सूचना गरेको थियो । उनको मनन् र मिक्स एल्बम बजारमा आइसकेको छ । यस अघि २०५६ सालतिर मिक्स एल्बम निकालेका थिए भने २०७३ सालमा मनन् निकालेर चर्चामा आएका थिए । ‘माया तिमी, ध्वजेको डाँडामा, भाइटीकामा भेट्न आउँदा, पूर्व मेचीलगायतका एकदर्जन गीत गाइसकेका राईको भाग्यमा नै गीतमा शब्द संगीत रहेको छ । उनी म्युजिक एरेन्जसमेत गर्थे । उनले धरान–१७ को निम्न माध्यामिक विद्यालयमा अस्थायी शिक्षकको रुपमा कार्यरत रहेका थिए भने उनको स्थायी ठेगाना भोजपुर हो । ३८ वर्षीय उनी किरात राई कलाकार संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका थिए ।
सृजनाको छड्के नजरमा किरण भुतुक्कै
भोएज अफ क्रिएशन – ३ (A COMPLETE ...
ज्याकी च्यानको बलिउड गीतमा डान्समुभ
Rojin Shakya to choreograph International pageant Heritage Pageants 2019
दर्पण छाया २ को प्रचारमा साहाराको दौडधुप
फिल्म निर्माणमा हास्य कलाकारका ३ गुट, कुन गुटमा को-को ?
फिल्म ‘बुद्ध वर्न ईन नेपाल’को ट्रेलर सार्वजनिक
‘सुल्तान’को ट्रेलर रिलिज
Nepali little Star 2016
E planet (40)
Event Segment (80)
GIcon News (1,046)
GIcon News (823)
GLAM Sgement (38)
Trip the Lights (8)
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १६:४९
नेपालमा छायांकन गरिएको चलचित्र ‘इन्डियाज मस्ट वान्टेड’को ट्रेलर सार्वजनिक
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १३:०६
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १२:५८
E PLANET EPISODE5(ENTERTAINMENT & GLAMOROUR)
१२ फाल्गुन २०७२, बुधबार १५:२८
E PLANET EPISODE 12(ENTERTAINMENT & GLAMOROUR)
१२ फाल्गुन २०७२, बुधबार १५:२९
TRIP THE LIGHT DANCE PARTY AT BABYLON DISCO
१२ फाल्गुन २०७२, बुधबार १५:३३
फेशन शो मा नायिका निताको यस्तो लुक्स पछील्लो समय थोरै चलचित्रमा मात्र देखिन थालेकी नायिका निता ढुंगाना फेशन शो तथा म्युजिक भिडियोमा फर्किएकी छिन् । पछील्लो समय उनी फरिया डिजाईनले ...
फागून १७ गतेबाट रिलिज हुने सिनेमा ‘क्याप्टेन’को ‘कर्ली कर्ली कपाल’ बोलको गीत रिलिज गरिएको छ। सार्वजनिक गीतमा अभिनेत्री निरूता सिंहलाई भूवन केसी तथा अनमोल केसीसँग कम्मर मर्काउँदै गरेको देख्न सकिन्छ।गीतमा ...
Event SegmentGIcon NewsGIcon NewsMaleVideo
काठमाडौं । सन् २०१९ को ‘प्रोस्टाइल म्यानहन्ट इन्टरनेसनल नेपाल २०१९’ को उपाधि विवेश श्रेष्ठले जितेका छन् । आफ्ना १४ जना प्रतिस्पर्धीहरुलाई पछाडि पार्दै उपाधि जितेका विवेशले ‘मिष्टर फिजिक’को अवार्ड पनि ...
चलचित्र ‘सभर लभ’मा समावेश पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्रमा समावेश ‘साया’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकार आशिष पिया र रेवती क्षेत्रीलाई फिचरिङ ...
चलचित्र ‘बुलबुल’को गीत रिलिज रमाइलो शैलीमा गरिएको छ । ‘फ्ल्यास मोब’ शैलीमा यो चलचित्रको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । गीत सार्वजनिक गर्नका लागि देशका विभिन्न ५ शहरमा डान्सहरु तयार भएका ...